Furfural chemical compound Furfural (C4H3O-CHO), inonziwo 2-furaldehyde, inhengo inozivikanwa yemhuri yeva furan uye sosi yemamwe furani akakosha. Iyo isina mvura isina mvura (inofashaira poindi 161.7 ° C; yakadzama giravhiti 1.1598) ...
Chii Chinonzi Furfural? KC BRUNING Furfural imakemikari inogadzirwa neye organic organic iyo inowanzo gadzirirwa maindasitiri zvinangwa. Iyo inonyanya kugadzirwa neyekurima zvigadzirwa zvakadai seoat husks, bran, corncobs, uye sawdust. Mimwe yep ...
Bagasse Kudyara Fiber
Abstract Melanoma inongori chete ne4% yekenza dzese dzeganda asi iri pakati peanonyanya kuuraya mapundu. Dacarbazine ndiwo mushonga wesarudzo yekurapa melanoma muBrazil kuburikidza nehutano hweveruzhinji kunyanya nekuda kwemutengo wayo wakaderera. Nekudaro, iri alkyl ...